जतिबेला चीन संकटमा थियो, युरोप र अमेरिका ठट्टा गर्दैथिए, बल्ल उनीहरुको आँखा खुलेको छ
युवराज सँग्रौला , १२ चैत्र २०७६, बुधबार, ०१:११ pm
हामी सबैले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी एउटा रास्ट्र हौं। तेसैले हामीले एउटा रास्ट्रको जस्तो व्यवहार गर्न पनि जान्नु पर्छ। हामी अहिले संसारनै अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको समयमा छौँ। धेरै कुराहरु बाहिर प्रकट भएका छन र देख्न सकिन्छ। मन्थन गरौँ, चिन्तन गरौं, फेरि मन्थन गरौँ।
१. जब चीन कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडार्इं लडिरहेको थियो, वुहान बन्द गरिएको थियो, चिनियाँ जनता आतंकित थिए, चीन बिश्वलाई सहयोग र सद्भावका लागि आह्वान गरिरेहेको थियो तर त्यसबेला युरोप र अमेरिका ठट्टा गर्दैथिए। ट्र्म्पले पटक पटक चिनियाँ भाइरस भनी व्याङ्ग्य गरे। युरोपका शहरमा चिनियाँ मानिसहरु कुटिए। नेपालमा एउटा पत्रिकाले मजाक गर्दै माओको मुखमा मास्कलगाएको तस्वीर छाप्यो। नेपाल सरकारले मानवताका आधारमा सीमाना जोडिएको छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले लेखें। स्वयमसेवक, आफ्नो इच्छाले जान चाहाने एउटा चिकित्सकको समूह चीन पठाउनु पर्थ्यो। नेपालले चीन सँगको कुटनीतिमा ठूलो त्रुटी देखायो, त्यसबेला । चीन गएका नेपाली बिद्यार्थीलाई घर आउने अधिकार थियो। तर सरकारले रेस्कु, इभ्याक्युयसन वा उद्धार जस्ता गलत शब्द प्रयोग गर्यो। चिनियाँ जनताप्रति त्यसबेला जुन संवेदना हामीले देखाउनु पर्थ्यो, हामीले देखाएनौं। हामीलाई त्यसले कतै छोएन। तर जब महामारी पश्चिम पुग्यो, हाम्रा आँखा अचानक खुले।
२. यो भाइरस रोग थियो। यस्को रास्ट्रीयता थिएन। यो मानिसको विरुद्ध थियो रास्ट्रीयताको बिरुद्ध थिएन। तर युरो–अमेरिकन संचारमाध्यमले यसलार्इ राजनीतिक ठट्टामा बदले। साप र चमेरो खाएर भएको भनेर लेखे। पस्चिमी संस्थाले जनाबार मारेको पाप कराएको भनेर लेखे। केही नेपाली संचार माध्यमले पनि यही कुरा दोहोर्याए। अब चीन सकियो भनेर पस्चिमले खुसी देखायो, जब रोगका विरुद्ध लडार्इं शुरु गर्यो चीनले, अधिनायकवादको कुरा उठाए। कुटिकुटी मानिस थुनेको आरोप लगाए। अर्थात रोगलाई राजनीतिकरण गरे। त्यसको नक्क्ल गर्ने नेपालमा पनि थिए। पश्चिमी मुलुकले त्यसबेला चीनलाई यस महामारीका विरुद्ध सहयोग गर्नुपर्ने थियो। रोगमा राजनीति गर्नु हुने थिएन।
३. अहिले चीनले बद्ला लिएन। चीनले अन्तर्रास्ट्रिय दायित्वलाई राम्रोसँग आगाडी बढाइरहेको छ । उसले अहिले संवेदना र मानवीयताका आधारमा युरोपलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यो। उसले सहयोगका हात अगाडि बढायो। अहिले नेपाली पत्रकार माओका मुखमा टाँसेको मास्कले युरोपिएन जनताका मुखमा पस्नबाट भाइरस रोकिरहेका छन। यस महामारीले बिश्वका थुप्रै लुकेका कुराहरुलाई पनि बाहिर ल्याएको छ।
क. युरोप र अमेरिकामा भएको बिज्ञानको बिकास मानिसको जीवन बचाउने क्षमता, प्रबिधि र औषधिको खोज, अनुसन्धान र निर्माणभन्दा हातहतियार र अन्यथा प्रयोगका कुराहरुमा भएको रहेछ जुन क्षमता चीन, कोरिया र जापानले कोरोना रोक्न देखाए, जस्ता उपकरणहरु प्रयोग गरे, त्यो युरोप र अमेरिकामा देखिएन। यो भ्रष्ट पुँजीवादी उपभोक्ताबादी अर्थतन्त्रको विशेषता रहेछ।
ख. पुँजीवाद र समाजबादको बिचको फरक प्रष्ट देखिएको छ, अहिले। चीनमा जब यो भाइरसका विरुद्ध लडार्इं चलिरहेको थियो, सबैलार्इ सरकारले गर्ने सहयोग उस्तै थियो। गरिबले काम गर्न नपाएर मर्नुपर्ने र धनीले आलिसान महलमा आइसोलेसनमा बस्ने स्थिति देखिएन। तर पुँजीवादी अमेरीकामा धनिका लागि महंगा अस्पताल छन् । सबै सुबिधा छ्न। तर तल्लो आर्थिक अवस्था भएका जनताको हालत खराब छ। त्यहाँका संचार माध्यमले त्यो कुरा किन बाहिर ल्याउँदैनन् ? किनभने सबै संचार माध्यम कर्पोरेट हाउसका अधिनमा छ्न । र, उनीहरुको स्वार्थ भ्रष्ट पुँजीवादको सेवा गर्नु हो। यता नेपालमा पनि तिनको प्रभाव छ । तेसैले ट्र्म्पको मुखमा मास्क लगाएको तस्वीर छाप्दैनन। महामारीको सामाना गर्न पुँजीवाद असफल हुने रहेछ भन्ने कुरा, २० हजार मानिसमा संक्रमण हुँदा छ हजार मरेका घटनाले पुष्टि गर्छन घज्ञ । नेपालमा पनि धनीहरुको यो महामारी रोक्ने सहयोग देखिएन। धनीका अस्पतालमा ज्वरो आएका मानिस छिर्नै नपाउने अवस्था पो आयो।
ग. पस्चिमी पुँजीवादी अर्थतन्त्रका लागि यो महामारी त्राषदीसधीपुर्ण हुने देखियो। एसिया खासै प्रभाबित नहुने पनि देखियो। एसियामा महामारीलाई रोक्न चीनको सहयोगले भूमिका खेल्ने पनि देखियो। तर पस्चिमी प्रभावमा रहेको नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले चीनप्रति महामारीका समयमा नेपाल हाम्रो असल मित्र हो भन्ने भाव देखाउन सकेन । यो कुरा सरकार र दलहरुलाई अहिले पनि महसुश भएको जस्तो लाग्दैन। यस्ले नेपालको चीनसँगको कुटनीतिमा धमिरा लागेको आंशका गरिएको छ।
घ. चीनले अहिले जसरी डब्ल्युएचओ र यूएनसँग समन्वय गर्दै सहयोग आगाडि ल्यायो, त्यसबाट कुटनीतीमा परिपक्वता प्रकट भयो। उसको उत्पादन प्रणाली पुनः संचालनमा आयो। उसको अर्थतन्त्रले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अब रहेन । तर बिकसित देशको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने देखियो। चीनले एक अर्थमा छलाङ् मार्यो भन्दा हुन्छ । अन्तर्रास्ट्रिय सम्बन्धमा चीनको भुमिकालाई बर्खास्त गर्न अब संभब छैन।
४. के हुन्छ नेपालमा चीनको सशक्त उदयको यो अवस्था र पश्चिमाको यो संकटले ? थुप्रै प्रभाब पर्ने कुरा टडकारो छ । भारत यदि यस महामारीको प्रकोपमा चीनकै तहमा आयो भने, भारतलाई यो समस्या सम्बोधन गर्न संभब हुँदैन् । पैसा र बिज्ञान नभएर होइन, भारतको जनसंख्या सचेत छैन र नेपालमा जस्तै अनुशासनहिन अल्पज्ञानको शिकार भएको छ । यहाँ पनि कालोबजारी र भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । भारतमा महामारी फैलियो भने नेपाल तहसनहस हुन्छ। के सहयोग माग्ने हक छ हाम्रो चीनसँग अझै ? सहयोग त चीनले फरि पनि गर्छ। तर उनीहरु हामीलाई सहयोग दिनु अगाडि एक पट्क हाम्रो प्रवृत्ति देखेर मुस्कुराउने छ्न। के पस्चिमले हामीलाई चिकित्सक र औषधि ल्याउने छ ? तेसैले भनेको होला नि, श्रीमती श्रीमान छोडन सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न भनेर । हामीले भूकम्पमा चीनले लगाएको गुन स्मरणसम्म गरेका छौँ ? सरकारमा बस्नेहरुले मूल्यांकन गर्दा राम्रो होला।
५. यो समस्यालाई सरकारले हेलचेक्राइँ नगरोस। तत्काल निम्न कुरा गर्नु गर्नुपर्ने देखिन्छ।
क. चीनसँग सहयोग मागोस। चिकित्सक, औषधि र प्रबिधि तत्काल ल्याओस। आइसोलेसन गृह निर्माणमा सेनाको प्रयोग गरोस। बाँचे मात्र पछि प्रगति गरिने हो।
ख. कालाबजारी रोक्न र महामारीका नाममा देखिएको कालाबजारी र स्थानीय तहमा देख्न थालिएको अपब्यय रोक्न आपतकाल घोषणा गरियोस् ।
ग. सीमाना बन्द गरियोस र तराइका सबै शहरमा उच्चस्तरीय स्वास्थ समूहहरु पठाइयोस। तरार्इका जनतालाई आतंकबाट जोगाइयोस।
घ. घनी र ठूला मानिस बेइमान हुन्छ्न भन्ने प्रष्ट देखिसकियो। गरिबहरुलार्इ रासन बाड्ने धेरैवटा स्टोरहरु शुरु गरियोस।
६. हरेक समस्याले पाठ सिकाउँछ्। हाम्रो संघीयता कति सफल छ ? भन्ने यसले नै देखाउने छ । सरकारले राम्रोसँग डेलिभरी गरेन भने र दलहरुले आफ्नो औचित्यता प्रमाणित गरेनन भने बिद्युतको तालिम केन्द्रमा नेताहरुले पुग्नुपर्ने हुनसक्छ। भित्र र बाहिर दुबैतिर घेराबन्दी भएको देख्नु भएकै होला। निरो रोम जल्दा बांसुरीमा आफ्नो गीतको लय बनाउदै थिए। अहिले पो थाह भयो उनी रोम जलोस भन्ने चाहँदारहेछ्न। उनी त्यहाँ ठूलो महल बनाउन चाहँदा रहेछ्न। जतिबेला रोम जल्दै थियो, उनले बार्द्लिमा उभिएर हेरेछ्न, रातमा उज्यालो । उनलाई खुब मन परेछ । त्यसपछि जुन अराजकता रोममा जन्मियो, त्यसले रोम नै मासियो। हामीले आँखा खोल्नु आवश्यक छ । भूकम्पपछि मानिसमा अराजकता झन मौलायो। यो महामारीले अराजक पराबलियनहरुको ताँती झन झन बढ्ने छ। अहिलेको मोजमस्ती महङो हुनेछ।
प्राडा युवराज सँग्रौलाको फेसबुकबाट ।
महामारीको सन्नाटामा विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका, कसरी मुक्त हुने ?
ज्यालादारी र श्रमिक वर्गलाई पोखरेलको आग्रह-‘विशेष राहत प्याकेज ल्याएका छौँ, जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसौँ’
एनसीसी बैंकले आज यी ४१ शाखाबाट दिंदैछ बैंकिङ सेवा (सूचीसहित)